တရုတ် INT-TGG Multipole မြို့ပတ်အမျိုးသား Connector Plug 0B 1B 2B 3B စီးရီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | INTE-AUTO
မြို့ပတ်ရထားက F စီးရီး Connector
မြို့ပတ်ရထား H ကိုစီးရီး Connector
မြို့ပတ်ရထား K သည်စီးရီး Connector
မြို့ပတ်ရထားက S စီးရီး Connector
အမျိုးသမီး Socket Connector
အထီး Plug Connector
မြို့ပတ်ရထား 1P စီးရီး Connector
မြို့ပတ်ရထား 2P စီးရီး Connector
မြို့ပတ်ရထား 3P စီးရီး Connector
လျှပ်စစ် Hybrid ကို Connector
coaxial ပါဝါ Connector
အရည်ကို Power Connector
Pneumatic connector ကို
Watertight စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Connector
SP စီးရီး Connector
စိတ်ကြိုက် Cable ကို
INT-DHG Connector သတ္တု Push ကို Receptacle 0B 1B2Pull ...
INT-ZGG သတ္တုမြို့ပတ် Push ကိုအမျိုးသမီး Connector B က Pull ...
INT-ZCG B ကိုစီးရီးမြို့ပတ်သတ္တုအမျိုးသမီးကျားအသံ ...
INT-THG သတ္တုတစ်ဦးနှင့်အတူက Round တံတောင်ဆစ် Connector Pull Push ...
INT-TGG Multipole မြို့ပတ်အမျိုးသား Connector Plug 0B 1B ...
INT-TGG Multipole မြို့ပတ်အမျိုးသား Connector Plug 0B 1B 2B 3B စီးရီး
မော်ဒယ် (INT-TGG) .Series (00 ... 3B) ။ Key ကို (G) .Straight Plug, Cable ကို collet, သငျ့လျြောကွေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်ခွံမာသီး။
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 30000 ပိုငျးပိုငျး / လ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, PayPal က, Western Union
B ကစီးရီးလျှပ်စစ်မြို့ပတ်ရထား connector ကိုအောက်ပါအဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုပေး:
အဆိုပါ Push ကို-ဆွဲထုတ် Self-latching စနစ်၏ 1. လုံခြုံရေး။
လက်ဝါးကပ်တိုင်မိတ်လိုက်ရှောင်ရှားရန် 2. အကွိမျမြားစှာ key ကိုရှေးခယျြစရာ။
3. connector ကို alignment ကိုများအတွက်အလားတူ connectors ၏စနစ် («, G » key ကိုစံ) နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်တယ်။
အပြည့်အဝ EMC ဒိုင်းကာအဘို့အပြ 4. 360 °။
5. Multi-တိုင်အမျိုးအစားများကို232 မှအဆက်အသွယ်။
6. ဂဟေဆက်, ပုံနှိပ်အဆက်အသွယ်များ (ဖြောင့်သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ်) ။
အာကာသငွေစုဘို့ 7. အမြင့်ထုပ်ပိုးသိပ်သည်းဆ။
ပုံစံ စီးရီး L ကို M က တစ်ဦးက S1 S2
INT-TGG 0B 34 24 9.4 8 8
INT-TGG 1B 41 30 12 10 9
INT-TGG 2B 48 36 15 13 13
INT-TGG 3B 57 42 18 16 15
မှတ်ချက်: INT-TGG.0B.302.CLAD52Z: အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနံပါတ်များကိုဥပမာ "INT-" နှင့်အတူစတင်။
"Z ကို" အက္ခရာလျောက်ပတ်ကွေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်ခွံမာသီးဖြစ်ပါတယ်။ "52" ကေဘယ်လ် collet 5.2MM (cable ကိုအချင်းများအတွက်တောင်းဆိုမှုကို) ၏အရွယ်အစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကွေးကယ်ဆယ်ရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေအတွက်ကို INT-TGG.0B.302.CLAD52 ဖြစ်ပါတယ်
1. ခံနိုငျရညျ:> 5000 မိတ်လိုက်သံသရာ။
2. စို: 60 ºCမှာ 95% အထိ။
3. အပူချိန်အကွာအဝေး: -40 ºC, +250 ºC။
တုန်ခါမှု4Resistance ကို 15 ဂရမ် [10 Hz-2000HZ] ။
5. Shock ကခုခံ: 100 ဂရမ်,6က MS ။
> 48h: 6. ဆားချေးစမ်းသပ်မှုကိုလေပေါ်မှာပ။
7. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးညွှန်းကိန်း (mated): IP50 ။
ဒါဟာကျယ်ပြန့်အထူး signal ကိုဂီယာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ, အသံ / ဗီဒီယို, စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်း, ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်လိုင်းကိုအဘို့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်ကိုအသုံးပြုသည်။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်အကွိမျမြားစှာတံသင်နှင့်အတူစီးရီး B connector:
00B စီးရီး: 2,3,4 တံသင်
0B စီးရီး: 2, 3, 4, 5, 6, 7,9တံသင်
1B စီးရီး: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 14, 16 pins
2B စီးရီး: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 32 pins
3B စီးရီး: 2, 3, 4, , 5, 6, 7, 8, 9,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 30, တံသင်
INTE-AUTOဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်ကေဘယ် connector ကိုနှင့်တွန်း-ဆွဲထုတ်အထီးအမျိုးသမီး connector ကို cable ကိုဖြေရှင်းနည်းများ။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကြမ်းတမ်းလူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့ connectors အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများ enviroments မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ နှိမ့်ချကုန်ကျခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေအချိန်ကိုအတိုကောက်ဖို့ကိုကူညီပါ။
နောက်တစ်ခု: INT-TGG 00B စီးရီးမြို့ပတ် Connector လမျးဖွောငျ့ plug ကို Size ကို M7234PINs
ယခင်: INT-THG သတ္တု Push ကိုအသက် 30 pins မှကွေးကယ်ဆယ်ရေး2PINs တစ်ခွံမာသီးနှင့်အတူက Round တံတောင်ဆစ် Connector Pull
ပုံနှိပ်ပါ Cir များအတွက် INT-ZXG B ကိုစီးရီးတံတောင်ဆစ် Receptacle ...
INT-TEG B series IP54 Metal Push Pull Straight ...
INT-MGG B ကိုစီးရီးသတ္တု Push ကိုဆွဲထုတ်အီလက်ထရောနစ် Vac ...
INT-ZEG မြို့ပတ် Push ကိုသတ္တုအမျိုးသမီး Automotive Pull ...
Receptacle 0B 1B2Fixed INT-ZCG တံတောင်ဆစ်ဆက်သွယ်ရန် ...
INT-TGG Coaxial မြို့ပတ် Connector လမျးဖွောငျ့ Plu ...
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
ရှန်ကျန်း INTE-AUTO နည်းပညာ Co. , Ltd
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-755-23011350
New Release Straight Receptacle for Print...
New Release Plastic Circular Connector fo...
ပတ္တမြား Wong က